Vaovao - Ny Global Fiber Glass Mesh Market Report dia manolotra ny fironana, fanavaozana ary ny angon-drakitra momba ny tsena
Ny Global Fiber Glass Mesh Market Report dia mampiseho ny fironana, fanavaozana ary ny angon-drakitra momba ny tsena ankehitriny
Ity tatitra ity dia manome fomba fijery amin'ny antsipiriany momba ny indostrian'ny Fiber Glass Mesh mifototra amin'ny haben'ny tsena, ny fitomboan'ny Fiber Glass Mesh, ny drafitra fampandrosoana ary ny fotoana mety. Ny fampahalalana momba ny tsenan'ny faminaniana, ny fandalinana SWOT, ny fandrahonana Fiber Glass Mesh, ary ny fandalinana azo atao no lafiny lehibe voadinika ato amin'ity tatitra ity.
Ny tatitra ihany koa dia manadihady sy manombatombana ny fiantraikan'ny valan'aretina Covid-19 amin'ny indostrian'ny Fiber Glass Mesh, amin'ny fiheverana ireo mety ho vintana sy fanamby, antony manosika ary loza mety hitranga. Manombana ny fiantraikan'ny Covid-19 amin'ireo mpanamboatra Fiber Glass Mesh ary manome ny vinavinan'ny fitomboan'ny tsena miorina amin'ny toe-javatra samihafa (be fanantenana, pessimistic, be fanantenana, tena mety, sns.)
Lamba multiaxial dia tsy crimp, multi-axis ary multi-sosona lamba fanamafisana.
Ny isan'ny sosona, ny orientation, ny lanjan'ny lanja sy ny fibre an'ny sosona dia miovaova arakaraka ny tsipika vokatra sy ny fampiharana. Ny sosona dia stitched amin'ny alàlan'ny kofehy polyester.
Ny lamba dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny axis maromaro (0 °, 90 °, + 45 °, -45 °) na ampiarahina amin'ny tsihy voatetika sy ireo sosona voaly sy / na fitaovana tsy tenona.
Ny fampiharana mahazatra ny lamba multiaxial dia ny angovo avy amin'ny rivotra, ny fanamboarana an-dranomasina na an-tsambo, ny fialamboly na ny vokatra fialam-boly, fiara, aerospace ary fiarovana.
Ny sosona iray na ny sosona roving maromaro dia napetraka. Ny sosona ny rovings dia azo apetaka amin'ny lalana samy hafa miaraka amin'ny hakitroky samy hafa. Avy eo dia kofehin'ny kofehy terylene izy ireo. Ny lamba toy izany miaraka amin'ny firafitry ny harato dia Multiaxial Fabric izay antsoina hoe MWK fohifohy. Izy io dia mifanaraka amin'ny UP, Vinylester ary Epoxy sns.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny herin'ny rivotra, indostrian'ny sambo, fiara, fiaramanidina, habakabaka ary fanatanjahantena. Ny vokatra farany farany dia misy rivotra blasdes, vatan'ny sambo FRP, fiara ivelan'ny fittings, fiaramanidina ary vokatra habakabaka sns.
Fanamafisana ny rindrina ivelany
Ny vokatra vita amin'ny fibre an-tampon'ny vera dia ampiasaina indrindra ho toy ny substrat tsara ho an'ny fitaovana mitafo-drano. Izy io dia miavaka amin'ny tanjaka avo lenta, ny fanoherana ny harafesina ary ny fandosana mora foana ataon'ny godorao sy ny sisa. Ny tanjaky ny lavareny sy ny fanoherana ny ranomaso dia azo hatsaraina bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo fanamafisana ao anaty sela manerana ny sakany iray manontolo. Ny vatan-tafo voaporofo amin'ny rano vita amin'ireo substrata ireo dia tsy mora vaky, mihantitra ary lo. Ny tombony hafa amin'ny tavy mitafo-rano dia ny tanjaka avo, ny fitoviana tsara, ny kalitaon'ny toetr'andro, ary ny fanoherana.
Ny tsihy fitaratra ho an'ny faritra FRP dia misy fanaparitahana fibre, ambonin-malama, fahatsapana mora malefaka, atiny ambany vita amin'ny binder, fananganana resina haingana ary fankatoavana ny bobongolo tsara izay mampihatra indrindra amin'ny fizotran'ny famolavolana FRP hafa toy ny famolavolana gazety, famaohana, centrufugal famolavolana mihodina.
1.C-fitaratra fitaratra ampiasaina amin'ny masinina na fandidiana tsy tapaka miasa tànana vita amin'ny vokatra fiberglass (FRP), ny lovia, ny fantsom-panafody, ny fantson-drano, ny kapoaka, ny yacht, ny vokatra tub.
2.E-vera fiberglass mahatsapa ampiasaina ho an'ny epoxy manify aorian'ny COINS sy ny vokatra insulation elektrika.
3.Alkali fitaratra fibre nahatsapa ampiasaina amin'ny batterie mitoka-monina, tafo tsy misy rano, plasterboard no tontonana, gorodona vita amin'ny plastika ary fantsom-panafody simika nopetahany leakage, fitaovana manara-penitra.